SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii lixaad ee Sindibaad iyo godkii buurta. qeybtii 45aad. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii lixaad ee Sindibaad iyo godkii buurta. qeybtii 45aad.
April 12, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: April 12, 2019
Habeenkii xigay Shahar-Zaad waxay tiri waxaa isoo gaartay boqorow in Sindibaadkii badmaaxa ahaa uu ku yiri Sindibaadkii xamaaliga;
Markii aan kasoo laabtay safarkeygii 5aad ayaan aad ugu farxay inaan magaaladii aan jeclaa dib ugu soo laabtay waxaana bilaabay in keydkii hantideyda ee magaalada ii yaalay ku ganacsado waxaana magaalada joogay in mudo ah ilaa aan maalinkii dambo la kulmay koox safarleey ah oo safar ka timid aadna ugu faraxsan in magaaladoodii dib ugu soo laabteen.
Markii aan kooxdaas safarreyda aheyd la kulmay ayaan soo xusuustay waayaheygii safarka waxaana la yiri Rag caadadii ma baajiyo sidaas owgeed safarka caado ayuu ii noqday waxaana ka fursan waayay inaan markale safro.
Waxaan uruuriyay hantideydii waxaana kulmiyay ehelkeygii anigoo u sheegay inaan safri doono waxaana isku diyaariyay si aan u safro anigoo ugu dambeyn imaaday magaaladii Basra.
Waxaan magalaada ka kireystay aniga iyo koox ganacsato kale ah ah markab aad u weyn anagoo isku shubnay baddii.
Markii aan in mudo ah soconay ayaa waxaa noo yimid naaquudihii markabka asagoo naleh; waxaan ku suganahay xaalada halis ah waayo markabkeena wuxuu ka baxay badii uu ku safraayay asigoo dhex galay bad aanan garaneynin dabeylahana waxay noo jiidayaan Jiho aanan ogeyn marka aan Alle barino si uu nooga badbaadiyo.
Hadalka kabtanka wuxuu igu noqday ootin waxaana durba soo xusuustay safaradii dhibka iyo mashaqada badnaa ee aan soo maray kuwaasoo qaarkood aan ku weyn karay nafteyda waxaana ilaahay ka baryay in safarkaan uusan mashaqo nagu noqonin.
Markabkii ayaa wuxuu nala galay bad aanan aqoon u laheyn taasoo ay dul sabeyneysay dabeyl maraakiibta u jiidaneyso sida bir qabatada oo kale, waxayse xaalada nagu xumaatay markii ay dabeyshii sii xoogeysatay sidoo kalana markabkii nala qalibtay.
Anaga iyo wixii badeeco aan wadanayba badii ayaan ku darsoonay balse nasiib wanaag jaziirad ayaa noo dhaweyd taasoona ay dabeyshii isla markiiba nagu tuurtay.
Markii aan jaziiradii imaanay ayaan waxaan aragnay in jaziirada ay horey ugu geeriyoodeen dad badan oo naga horeeyay sidoo kalana waxaan jaziiradii ku aragnay maraakiibtii ay wateen oo jajaban iyo badeecadoodii oo meesha buuxday.
Jaziiradii ayaan ku wareegsanay waxayna aheyd jaziirad xiran oo meel laga baxo aysan laheyn sidoo kalana waxaa ku yaalay buur weyn oo ay il biyo macaan leh kasoo burqanayeen waxayna ishaasi ku taalay salka buurta oo aad moodo god biyo ka buuxaan.
Sahaydii aan wadanay badankeeda bada ayay kusoo daataday jaziradana malahan wax geed mirood nafta lagu celiyo iyo kistii sahayda aheyd noosoo hartayna ay bilowday iney is dhinto waxaana naga xumaaday xaalkii.
Jaziiradii ayaan maalmo joognay anagoo aanan heysan wax aan bada dib ugu laaban karno isla markaasna jaziiradaan uga badbaadi karno.
Xaalada waxay naga sii xumaatay markii ay sahaydii naga go’day dadkii markabka saarnaana ay bilaabeen iney tarab tarab u daataan gaajo darted waxa kaliya ee noo harayna wuxuu ahaa ishii biyaha ee buurta kasoo burqaneysay.
Sidii ay rakaabkii marba mid u dhimanayay anagana u duugeynay ayaa ugu dambeen waxaa soo haray anigha oo kaliya waxaana noqday mid aad u tabar daran anigoo toogtaan yaqiinsaday in waqtigii aan dhiman lahaa la gaaray.
Anigoo jaziiradii dhex fadhiyo dhimashana u diyaar garoobay ayaa waxaa igu soo dhacday fikrad aheyd godkaan buurta ku yaalo ee biyaha kasoo burqanayaan inaan ogaado halka uu ku dambeeyo waayo biyihiisa waxay iila ekaadeen biyo wabi waxaana is dhahay haduu wabi yahay laazim waa meel dad joogaan haduusan aheyna awalba nolosha rajo kama qabin ee ku nasiibso.
Godkii ayaan dhex galay anigoona biyihii soo dhex quusay waxaana isugu key darsamay daal tamar dari iyo caburkii biyaha ilaa ugu dambeyn aan biyaha ku dhex suuxay.
Waxaan soo miirsaday anigoo wabigii geeskiisa oo ahan halkii biyaha ka yimaadeen dhex jiifa waxaana ikor taagnaa dad aan ku qiyaasay iney yahuud ahaayeen iyagoona af aanan aqoonin igula hadlayay……..
La soco qeybta 46aad.
Waad inagu ciyaareysaan hadaad Tihiin reer filimside ma tihiin shabakad go’aan leh oo hore socod leh waxaan arkaa Qoraallo badan oo aad dib usoo daabacdeen halkaad kuwo kale cusub dadka ku kasban lahaydeen
Sidoo kale sheekadaan labo sano kahoraad bilowdeen Xili walbana intaad bilowdaan ayaad dhex ugaaga tagtaan fadlan cayaarta inaga daaya ee ina xishmeeya Aqristayaashana ha niyad jabinina,
Waxa Toos u wada ama inaga wada dhaafa,
Sxb abdirahman ateeno ugu horeyn waan ku salamay welcome back lkn fadlan sheekadii jinka ayaa ka wanaagsaneed ee midaas dib inooguanba qaad insha alaah